Home - BJV
See our BJV Project Overview Video & More
BJV စီမံကိန်း အကျဥ်းချုပ်ဖော်ပြချက်နှင့်အခြားအချက်အလက်များကြည့်ရန်
Bawdwin Joint Venture
Bawdwin mine in Northern Shan State, Myanmar, is historically one of the longest operating and most important base metal mines in the world, but now an exciting new future for the mine is being planned.
The Bawdwin Joint Venture, comprising Myanmar and Australian partners, intends to re-develop Bawdwin to become the flagship project inarenewed Myanmar minerals sector.
Read here about the project, the Bawdwin Joint Venture partners and the process that will be followed to re-develop Bawdwin.
Read on to understand the Environmental Impact Assessment process that will be followed to ensure the mine minimises risks to the environment and communities, while maximising opportunities for communities and other stakeholders to benefit from the development. Also learn how you can find more information and comment on the project.
မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော ဘော်တွင်းသတ္တုတွင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်ကြာဆုံး သတ္တုတူးဖော်ခဲ့ပြီး အရေးအကြီးဆုံး တန်ဖိုးနည်းသတ္တုထွက်ရာ သတ္တုတွင်းများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် သမိုင်းဝင်တည်ရှိခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်လည်း သတ္တုတွင်းအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အနာဂတ်အသစ်တစ်ခုကို စီစဉ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
ဘော်တွင်းဖက်စပ်စီမံကိန်း သည် မြန်မာနှင့် ဩစတေးလျစီးပွားဖက်များ ပူးပေါင်းထားပြီး ဘော်တွင်း သတ္တုတွင်းအား ပြန်လည်ထူထောင်ကာ ခေတ်မီဆန်းသစ်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံ သတ္တုကဏ္ဍ၏ အထင်ကရစီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများ၊ ဘော်တွင်းဖက်စပ်စီမံကိန်း၏ စီးပွားဖက်များနှင့် သတ္တုတွင်းပြန်လည်ထူထောင်ရာတွင် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဤနေရာတွင် လေ့လာဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။
ဒေသန္တရသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် သတ္တုတွင်းမှ ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်နိုင်သမျှ လျော့နည်းစေရန်နှင့် ဒေသခံများ၊ သက်ဆိုင်သူများအနေဖြင့် သတ္တုတွင်းမှ အကျိုးအမြတ်များ ပိုမိုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြင်ဆင်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို သိရှိနားလည်စေရန် လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ထပ်မံသိလိုသော အကြောင်းအရာများ၊ ဝေဖန်အကြံပေးချက်များ ကိုလည်း ပြောကြားနိုင်ပါသည်။
Our vision is to become responsible custodians of the environment, ensureasafe and healthy workplace and to respect human rights and the customs of stakeholders.
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျန်းမာ၍ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု ဖန်တီးပြီး လူ့အခွင့်ရေးနှင့် ဒေသအလိုက် ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို လေးစားလိုက်နာကာ တာဝန်ယူမှုရှိသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူများ အဖြစ် ရပ်တည်လုပ်ကိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
Win Myint Mo Industries Co Ltd holdsaproduction permit for the Bawdwin mine, issued by Mining Enterprise Number 1, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation.
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆောင်ရွက်ချက် အကျဉ်း ၀င်းမြင့်မိုရ်စက်မှုလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် (WMM) သည် အမှတ်(၁) သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း၊ သယံဇာတနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော သတ္တုတူးဖော် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်အား ကိုင်ဆောင်ထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
Mining of the Bawdwin resource dates back to the 15th century, with Chinese artisanal miners extracting silver from surface and near surface deposits.
သမိုင်းကြောင်း ဘော်တွင်းသတ္တုတွင်းစီမံကိန်းကို ၁၅ရာစုတွင် တရုတ်သတ္တုတွင်း အလုပ်သမားများနှင့် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး မျက်နှာပြင်နှင့် မျက်နှာပြင်အနီး သတ္တုသိုက်များမှ ငွေတူးဖော်ခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၀၀ နှစ်များ
The consultants that are currently working on the feasibility studies are as follows.
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့ လက်ရှိတွင် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသော အကြံပေးအဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Copyright © 2019 BJV. All rights reserved.